Uggura beeksisa dhugaatii alkooliifi yaaddoo ogeeyyii miidiyaa - BBC News Afaan Oromoo
Ministeera Fayyaatti bulchiinsi nyaataa fi qorichaa labsii haaraa dhugaatiiwwan alkoolii karaa raadiyoo, TV fi barjaalee akka hin beeksifamne dhorku Caamsaa 29, 2019 irraa kaasee hojiirra olchu eegaleera.
Labsiin kun miidiyaan kamiyyuu beeksisa dhugaatii alkoolii akka hin tamsaasne dhorka.
Kun ammoo dhaabbilee Raadiyoo fi TV akkasumas bu'aalee maxxansaa hedduu beeksisa dhugaatii alkoolii fi deeggarsa warshaalee biiraatiin galii argataniif oduu gaarii miti.
Labsiin haaraan amma hojiirra akka olfamu taasifame kun dhaabbile kanneen irratti dhiibbaa attamii qabaata?
Farsoo waggaa 13,000 dhandhamuu feetuu?
Irra caalaa kan beeksiisa hojjachiifatan warshaalee biiraa waanta'aniif seerichi damee bashananaa ni miidha, haa ta'u malee dhalootaaf yaaduun tarkaanfii fudhatame yoo ta'e akka waan gaariitti fudhatamuu danda'a" jedha Abbaan qabeenyaafi qopheessaan barruu Qumnagar Obbo Taammiraat Haayilu.
"Garuu biyya keenyaatti rakkinni beeksisa gama raadiyoo fi TV'n dabarfaman irra osoo hin taane haala itti dhiyaatudha'' jedha.
Beeksiifni dhugaatii alkoolii biyyoota biraattis kan baramee ta'ulleen haalli ittiin dhiyaatu garuu kan qoratameedha jedha Obbo Taammiraat.
Beksiifni biiraa fakkeenyaaf akkaataa itti dabarfamu haala namoota hawwatuun ta'usaa malee booda garuu dhuguma beeksisichi lakkoofsa namoota dhuganii dabaleeraa jechuun qorannoon akka hin gaggeefamne dubbata.
Seerichi osuma hojiirra ooluu hin eegaliin durayyuu warshaaleen biiraa beeksisa kennuu dhaabaniiru. Kunis dhiibbaa fideera kan jedhu Taamiraat, dhorkuurra haala itti dhiyaaturratti dubbachuu wayya ture yaada jedhu qaba.
Kana malees warshaaleen biiraa maallaqa olaanaa kan dhangalaasanii fi hojjattoota hedduu kan qaban waan ta'aniif beeksiisuu dhabuusaaniitti kan galiin hir'atu yoo ta'e diinagdee biyyaa ni huba soda jedhus qaba.
''Sagantaalee hedduun kan deeggaraman beeksisa warshaaleen biiraa hojjachisaniin'' kan jettu qopheessituun sagantaa FM Elsaa Asaffaa, dhimma dhorkaa beksisichisaa haala sadiinan ilaala jetti.
"Kan jalqabaa keessattu dhaabbileen deeggarsaa fi galii beeksiisaatiin hundeeffamaniifi sagantaalee saanii tamsaasan galii ni dhabu."
Goodayyaa suuraa Uggurri beeksisa dhugaatii alkoolii Caamsaa 29, 2019 irraa kaasee hojiirra ola
Kan biraa ammo akka qaama hawaasaatti haalli beeksifni itti hojjatamaniifi moggaasa warshaalee biiraa irraa dhaloonni beekumsa attamii argachaa guddatu gaaffii jedhu kan kaasisuudha jetti.
''Biiraa dhuguun akka nyaataa fi qoricha fudhachuutti beeksifamaa ture'' kan jettu Elsaan, beksifni haala daa'imman hin miineen akka dhiyaatuuf qorannoo gaggeessuun sirreessun ni danda'ama ture jetti.
Baroota darban keessa beeksisaaf maallaqa guddaa baasaa kan turan warshaalee biiraati kan jedhan ogeessi miidiyaa obbo Xibabuu Ballaxaa, buufataalee Raadiyoo ykn TV haaraa saaquuf amma warshaalee biiraa waliin mari'atamuttu gaahamee ture'' jedhu.
Warshaaleen biiraa hedduus sadarkaa midiyaalee to'achurra qaqqabaniiru kan jedhu obbo Xibabuun, beeksisawwan kunneenis Itoophiyummaa, eenyummaa, fi olaantummaa waliin walitti hidhuun namoonni dhugdu alkoolii akka ta'aniif dhiibbaa taasisaa turuusaanii eera.
Akka dhunfaattis kan isa yaaddeessee ture ta'u hin dhoksine. Waan kana ta'eefu, beeksifni biiraa dhorkamunsaa tarkaanfii gaarii ta'usaa dubbata.
Midiyaaleen sagantaa qulqullina qabuufi dhimmoota dhagahamu danda'an kan dhiyeessan yoo ta'e dhaabbata deeggarsa taasisuuf hin dhaban amantaa jedhu akka qabu hima
Seerichi midiyaalee maxxansaaf...
Seerri bulchiinsa nyaataa fi qorichaa amma hojiirra olfame kun beeksiisa dhugaatii alkoolii kan dhorku raadiyoo, Tv fi biilboordiidhaani.
Kanaafuu midiyaalee maxxansaa qaala'iinsa gatii maxxansaa fi hir'ina dubbisaatiin hubamaa jiruuf abdii ni keenna jedha Obbo Taammiraat.
Barruuleefi gaazeexaa kan dubbisan namoota itti gaafatamummaan itti dhagahamufi buleeyyii akka ta'an kan dubbatu Taammiraat, gatii maxxansaa yeroo gara yerootti dabalaa dhufe dandamachuun kan danda'amu galii beeksisaa qofaani jedha.
Kanaanis qulqullina, tamsaasa fi aadaa dubbisuu fooyyeessuun ni danda'ama jedha.
Haa ta'u malee ammas seericha irratti burjaajiin jiraachusaatiin dhaabbileen beeksiisaa fi warshaaleen biiraa hundumaaf dhorkame jechuun sochii taasisaa akka hin jirre ibsa.
''Tamsaasi midiyaalee maxxansaa Itoophiyaa keessatti baay'ee dadhabaadha, yoo attam baay'ate maxxansi kuma shanii hanga jahaa caalaa hin gurguramu.''
Beeksiifni dhugaatii alkoolii midiyaalee maxxansaatiin osoo bahee daa'imman irratti miidhaa hin qabatan jedha.
''Akka mallattoon daldalaa isaanii hin dagatamneef gara miidiyaalee maxxansaa dhaqu malu,'' jechuun kan tilmaamte Elsaan ammoo miidiyaan maxxansaa amma dadammaqaa kan jiru waan ta'eef caalaa akka cimsu amantaan qaba jetti.